Naya Post Nepal | ईन्द्रेणिका कृष्ण कंडेलको दराजमा पचास लाख भेटियो ? (हेर्नुस भिडियो)
ईन्द्रेणिका कृष्ण कंडेलको दराजमा पचास लाख भेटियो ? (हेर्नुस भिडियो)
काठमाडौं- पछिल्लो समयको सबैको रोजाईको इन्द्रेणी बाट आम नेपाली जनमानसमा छाउन सफल लोकप्रिय कार्यक्रम प्रस्तोता तथा गायक कृष्ण कंडेल बिगत लामो समय देखि प त्रकारिता क्षेत्र र कलाकारिता क्षेत्रबाट आम नेपालीको मन जि,तेका गायक तथा इन्द्रेणीका संचालक कृष्ण कंडेलको घर सुर्खेत हो।
सबै परीवार अहिले राजधानीको बानेश्वरमा आफ्नै निवासमा बस्दै आएका छन। झन्डै २ दशक लामो संगीत र पत्रकारिता यात्रा तय गरिसकेका कंडेल अहिले पनि उस्तै तरिकाले कार्य गर्दै अ’गाडी बढेका छन।
द्वन्द,कालमा कंडेल सैनिक-रेडियो कार्यक्रम चलाउने गर्दथे, त्यो समय देखि सं,घर्ष गरेका कंडेलले सुरुमा इन्द्रेणीलाइ माउन्टेन टेलिभिजनमा प्रस्तुत गरे पछि उनले एबिसी टेलिभिजन हुदै हा ल हिमालयन टेलिभिजन एचडीबाट इन्द्रेणी कार्यक्रम प्रशारण हुने गर्दछ।
इन्द्रेणी लोक संगीतको जननी जस्तै भएको छ। पुराना अग्रज कलाकार संगै नवप्रतिभा हरुका लागि मात्र नभयर इन्द्रेणी अ हिले धेरै दु:खी पिडीतहरुका लागि समेत एक मन्दिर सम्झने ब्याक्ती धेरै हुने गर्दछन। तेस्तै गरेर अहिलेको एक चर्चित कार्य कर्म “रजतपट” मा दिएको अन्तरबार्ता सार्बजनिक भएको छ ।
कार्यक्रमका सन्चालक प्रकाश सुबेदीले कृष्ण कंडेलको बिगत देखी अहिले सम्मका कुरा यसरि खोलेका छन । अब आउनुस उहा सङ्ग गरिएको कुराकानी हेरौ –
यो पनि ,,विराटनगरस्थित नाेवेल अस्पतालमा कार्यरत चि”। कित्सक विजय यादव शनिबार बिहान मृ”त अवस्थामा फे”ला परेका छन्। सप्तरीकाे राजविराज घर भएका र तीन वर्षयता नो वेलको अर्थोपेडिक विभागमा कार्यरत मेडिकल अफिसर यादव बिहान मृ’त भेटि’एका हुन्।
अस्पतालनजिक डेरा बसेको घरको कम्पाउण्डभित्र बिहान ७ बजेतिर उनी मृ”त फे’ला परेको प्र”हरीले जनाएको छ। श’व अहिले घ”टनास्थलमै छ। सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिका–१ घर भएका अन्दाजी २७ वर्षीय डा. यादव विगत ४ वर्षदेखि वि राटनगर–४ स्थित प्रेम बस्नेतको घरको दोस्रो तलाको कोठा भा डामा लिएर डेरा बस्दै आएको प्र”हरीले जनाएको छ।
डा. यादव नोबेलको हाडजो’र्नी तथा नशा रोग विभागमा कार्य रत मेडिकल अफिसर हुन्। उनी ४ वर्षअघिदेखि नोबेलमा कार्य रत थिए । घ”टना कसरी भयो भनेर यकिन हुन सकिरहेको छै न। अनु’सन्धान’का लागि घ”टनास्थलमा प्र”हरी टोली ख’टि एको छ ।
आफन्तले भने घ”टना शं’का’स्पद रहेकाले ग’म्भीर ढंगले अ नुसन्धान गरेर सत्यतथ्य पत्ता लगाउनुपर्ने माग गरेका छन्। मृ ”त फेला परेका डा. यादवको सप्तरीस्थित घरमा रहेका परि वारका सदस्यलाई पनि घ’टना’का बारेमा जानकारी गराइसकि एको प्रहरीले जनाएको छ।
घ”टनास्थलमा भेला भएका आफन्तबीचमा भने रु”वाबासी चलिरहेको छ। घो’प्टो परेको र नाक तथा मुखबाट र’ग’त ब ’गिर’हेको अवस्थामा डेरा बसेको कोठाबाट मुनिको भुइँमा उनको शव भेटिएको मोरङ प्र”हरीले जनाएको छ।
अहिले प्र”हरी परिचालन गरेर घ”टनाका बारेमा अनुसन्धान था लिएको छ। प्रहरीका अनुसार डा. यादवको मृ”त्युको का’रण खु ल्न सकिरहेको छैन। यद्यपि घ”टनास्थलको प्रकृति हेर्दा हा’म’ फा’ले’र उनले दे’हत्या’ग गरेको हुनसक्ने आशंका प्र”हरीले गरे को छ।
२८ वर्षका डा. यादव बंगलादेशबाट एमबिबिएस गरेर फर्केपछि नोवेलमा कार्यरत थिए। मृ”तकका आफन्तले डाक्टरकाे ह’ ‘त्या भएकाे भान्दै घ’टना’मा सं’लग्नलाई का”रबाही गरिनुपर्ने मागसहित नाराबाजी सुरु गरेका छन्।
२०७८ चैत्र २०, आईतवार प्रकाशित 1 Minute 2163 Views